Tababar Ciidamada Dowlada looga furay Muqdisho. - Caasimada Online
Home Warar Tababar Ciidamada Dowlada looga furay Muqdisho.
Tababar Ciidamada Dowlada looga furay Muqdisho.
Ciidamo ka tirsan Dowlada Soomaaliya ayaa maanta waxaaa tababar loogu furay Mgaaalada Muqdisho kuwaa oo ah Boolis.
Tirada Ciidan ee tababarka loo furay ayaa waxaa ay gaarayaan 40 iyadoo goobta ay ku sugnaayeen Saraakiil ka tirsan Dowlada iyo Amisom.
Taliyaha Dugsiga Tababarka Xarunta Generaal Kaahiye ee Magaalada Muqdisho Generaal Abuukar Axmed oo halkaasi ugu horeyn ka hadlay ayaa wuxuu sheegay in ujeedka tababarka uu yahay sidii ciidankaan loo bari lahaa Baarista dambiyada kala duwan.
Masuuliyiinta Dowlada ayaa ku booriyay Ciidamada tababarka loo furay in Casharadooda si wanaagsan ay u qaataan.
Afhayeenka ciidamada Booliiska Soomaaliyeed C/laahi Xasan Bariise oo halkaasi ka hadlay ayaa dhankiisa dardaaran xoogan ujeediyay ciidamada Booliiska ee 40-gaaraya kuwaasi oo maanta tababarka dambi baarista loo furay.
Taliyaha ayaa ciidamada tababarka loo furay kula dardaarmay inay si hufan u qaataan casharadooda ku aadan tababarka islamarkaana marka ay soo qaataan tababarka si wanaagsan ugu dhaqmaan.
Ujeedada tababarka Ciidankan ayaa waxaa uu yahay sidii ay u baran lahaayeen Arimaha baarista dambiyada.